के हाे मेमोरी कार्ड ? - Paschimnepal.com
के हाे मेमोरी कार्ड ?
Prakash Subedi (Janamaitri Multiple Campus) (BICTE 3rd Semster,)
मेमोरी कार्ड (Memory Card) भनेको के हो ?
मेमोरी काड(Memory Card):- Digital information लाइ storage गर्ने प्रयोग गरिने device लाई नै Memory Card भनिन्छ । Memory Card लाई SD(Secure Digital) कार्ड पनि भनिन्छ । यो एउटा Portable device अन्र्तगत पर्दछ । सामान्यतया क्षमता र आकारका आधारमा मेमोरी कार्ड ३÷३ प्रकारका हुन्छन । जुन यसप्रकार रहेका छन ।
क्षमताका आधारमा (Base on Capacity)
१) SD Card यो पहिलो पुस्ताको मेमोरी कार्ड हो । यसको मोटाई 2.1mm, लम्बाइ 15.0mm , चौडाई 11.0mm तथा क्षमता2GB सम्म हुन्छ ।
२) SDHC(Secure Digital High Capacity):- यो दोस्रो पुस्ताको मेमोरी कार्ड हो । यो पनि SD जस्तै हुन्छ । यसको क्षमता ४ GB देखि ३२ GB सम्म हुन्छ । यसप्रकारको मेमोरी कार्ड सन् २००६ देखि उपलब्ध हुन थालेको हो ।
३) SDXC(Secure Digital Extended Capacity):- यो तेस्रो पुस्ताको मेमोरी कार्ड हो । यसको क्षमता ४८ GB देखि २ GB सम्म हुन्छ । यसप्रकारको मेमोरी कार्ड सन् २००९ देखि उपलब्ध हुन थालेको हो ।
अकारका अधारमा (Base on Size)
Main SD Card :- Devices मा सिधैँ प्रयेग गर्न सकिने SD Card लार्इ मूल एसडी भनिन्छ ।
Mini SD Card:- Adapter को माध्यमद्वारा Devices मा प्रयोग गर्ने सकिने SD Card लाई मिनी एसडी कार्ड भनिन्छ ।
Micro SD Card:- Adapter को माध्यमद्वारा Devices मा प्रयोग गर्ने सकिने SD Card लाई माईक्रो एसडी कार्ड भनिन्छ । जुन Mini SD Card भन्दा केही सानो हुन्छ ।
मेमोरी कार्डको गति (Speed) / Class (श्रेणी) कसरी थाहा पाउने ?
Speed of Memory:- Memory Card मा भएको अधुरो गोलो आकार भित्रको अङ्कले Memory Card के Class बुझाँउछ । अधुरो गोलो आकारमा २ लेख्नुको अर्थ class2हो ।
यसैगरि जति अंक लेखिएको छ । त्यति नै Class sf] Speed छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैगरी अंग्रेजी अक्षर ‘U’ जस्तै चिन्हको भित्र १ वा ३ लेखिएको छ भने त्यसबाट प्रतिसेकेन्ड १० वा ३० MB के Speed दिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ १९, २०७४ 8:41:30 PM
Prev‘रातै भयो कर्नालीको बाटो…’
Nextवैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सुध्रिदै सुर्खेतका जंगल